Ummeli ngamnye weendlobano ezifanelekileyo zesini esilungele kakuhle, ezintle kunye nexesha elide. Namhlanje, eli phupha lingafumaneka kwiiyure ezimbalwa nje. Ukwenza oku, kufuneka nje ukutyelela i-salon yobuhle esiseduze kwaye wakha izipikili ezingenakwenzeka eziza kubonakala zingcono kunezipikili zendalo.
Kodwa, ngelishwa, ukwakheka, ukugqoka nokukhutshwa kwezipikili ezingenakwenziwa kwiintlobo zabesetyhini kukukhokelela kwimiphumo emibi - iplantshi ye-nail ephuzi, ukucuthwa, ukuma, ukusabalalisa kunye nezipikili eziphazamisayo. Ngokuqhelekileyo oku kwenzekayo xa umphathi ofanelekileyo ethatyathwa kwiinkonzo zesikhonkwane. Inkqubo eyenziwe ngokungakhathali iya kuthintela iplatheni yepiki kunye ne-okolonogtevom yesikhumba esikhwele. Ngenxa yeso sizathu, sanquma ukuxoxa ngezinto ezikhokelela ekwakhiweni kwezipikili kunye nemiphumo yale nkqubo.
Yintoni eya kubangela ukwakhiwa kwezipikili, ngokwezinga lezinto eziyinkimbinkimbi yemiphumo, inokwahlukana ngamaqela alandelayo: kususwa kalula, kunzima ukuphelisa nokungafihli. Ezi zilandelayo zibandakanya ukulimala kweeyil, ukutshiswa kweekhemikhali kunye nokusuleleka kwintsholongwane. Le miphumo ingasuswa kuphela ngugqirha.
Ukulimala kwepilisi yesilonda
Njengomthetho, kuvela ngexesha lokungagqibekanga kokugcinwa kwemimiselo ye-hygiene-hygienic, okanye ngenxa yokufumana iimpazamo zobugcisa kwinkqubo yokwakhiwa kwesilumko. Ngenxa yoko, ikhokelela ekwakheni iindawo eziluhlaza okomhlaza ohlaza okomhlaza ohlaza okwesibhakabhaka onobukhethe obukhethekileyo phantsi kwetafile yepiki. Ukuba oko kwenzeka, kufuneka uqhagamshelane nenkosi ekufuneka isuse izipikili kwaye isebenzise ifayile elahlayo ukuphosa indawo yesihlunu. Emva koko, indawo echaphazelekayo kufuneka iphathwe ngeziyobisi zokulwa ne-antibacterial. Ukuba isalathisi sanyamalala, kwaye intsholongwane yayingenangqondo, unokwakha kwakhona izipikili.
Le ngxaki ibangelwa kukusetyenziswa kweengubo zokuguqulwa, ngenxa yokokuba iigaki ezinemibala enemibala enqamle zingene kwiqonga eliphezulu. Konke oku kwenzeka ngenxa yokungabikho kwesiseko esisisiseko sezipikili. Ukususa le ngxaki kunokwenziwa ngokukhawuleza. Emva koko isambatho esisezantsi sisetyenziselwa isikhonkwane kunye nempumelelo yokubuyisela nokuqinisa.
Ukungalingani kwiplani yesilumkiso
Ngokuqhelekileyo oku kubakho ngenxa yokuchithwa okungafanelekanga (ukufakela ngokujulileyo okanye ukubonela okunzima). Ukuphelisa le mpahla usebenzisa isambatho esikhethekileyo sokubhinqa, apho ekubunjweni kwayo kunezixhobo ezifakwe kwi-fibrous fillers. Kwimeko apho iindawo ezinzulu okanye iingcambu zithe zavela, kuyacetyiswa ukuba isebenzise inkqubo yokukhonkwane izikhonkwane.
Ngokuqhelekileyo, imfundo, oko kuthiwa "inyathelo" ibangela ukuba kususwe izipikili ezingumsebenzi. Kwakhona, ukubunjwa kwendawo engaphezulu kwesikhonkwane semvelo kubangela ukwakheka kwayo ukuze kususwe iipropati zabo zokunamathela. Ukuphelisa le mpazamo ngokusebenzisa izambatho zokulinganisela.
Ukucwina kwe-okolonogte isikhumba somhlaza
Kwenzeka nge-manicure ehlanjwe, ngexesha leemveliso zamakhemikhali zokwakha okanye ukuguqula umlomo kwi-roller ngomlomo. Kulo mzekelo, kuyimfuneko ukushiya i-cuticle manicure kwaye usebenzise ioli ukwenzela i-cuticles kunye ne-lotion ngesandla ngesiphumo esiphuculisayo.
Yonke le miphumo ibonisa ukuba inkqubo yokwandiswa kwesikhonkwane yinkqubo enzima kakhulu, efuna izakhono ezizodwa, ingqwalasela kunye nekhono. Yaye yonke impilo yezikhonkwane zemvelo ixhomekeke ngokupheleleyo ekukhutshweni kwezipikili zokufakelwa. Yithemba le nkqubo inyanzelekile kumphathi ofanelekileyo, emva kokususa isikhonkwane, kufuneka aphathe isamba sekhoboka ngoncedo lwezixhobo ezizodwa.
Kwaye, ekugqibeleni, khumbula ukuba ngokuzakhela ixesha elide kunye nokusetyenziswa kwezipikili ezingumsebenzi, umonakalo omkhulu kubangelwa izixhobo zokwakha. Kwaye akuxhomekeke kwinqanaba lekhwalithi okanye inqanaba lokuqeqeshwa kwekhosi, kuba kukho nawuphi na le nkqubo ihombisa ukucutha kunye nokuqhwala kwezipikili. Ngoko, ngaphambi kokuzikholisa ngezikhonkwane ezinjalo, zilinganise zonke iingxaki kunye neqhinga le nkqubo kunye nemiphumo yayo!
I-Minimalism vs I-Eccentricity: iimeko ezintsha ze-nail art
Indlela yokukhetha isethi yokwenza umuthi
I-Shellac yezipikili: i-pros and cons
I-Nogodochki - ifoto yoyilo oluyiyo kunye nemifashiso yendlela yokufumba
Abantwana ukusuka ku-0 ukuya ku-1 unyaka: uphuhliso kunye nesondlo
Intlanzi ye-Aquarium, unakekele
Uthando oludlulileyo: U-Amber Heard uhlukanisile noJohnny Depp
Inkqubo yesikhumba nomzimba ubuhle
Ngaba isondo kwindawo yamanzi yingozi?
Iibhloko ze-calorie: ngaba ziyasebenza kwaye zikhuselekile?
Ukupheka ukutya kweJapan ekhaya